Edere site Tranquillus | Sep 22, 2018 | Mmepe onwe onye
Mgbe ị na-enwe ọ expressụ, igosipụta ọ joyụ na obi ụtọ ị na-enwe n'ime ala bụ ihe doro anya. Na mgbakwunye, ọ dị mfe iru ebe ahụ. Nke a abụghị mgbe anyị nwere ike inwe mmetụta na-adịghị mma dịka egwu, iwe ma ọ bụ ọbụlagodi mwute. Chọpụta ihe ngwọta dị mma!
Gosiputa onwe gi ma obu mechie onwe gi?
Mgbe a na-enweta mmetụta dị mma dika ọṅụ, anyị na-achọkarị ịkọrọ ya. Ọzọkwa, a na-egosipụta ya site na anya na ihu. Nke ahụ kwuru, a ghaghị igosipụta ya n'ụzọ ezi uche dị na ya. N'ezie, anyị aghaghị ijide onwe anyị. Ịkpọ mkpu ma ọ bụ imegharị ọchị n'ihu ndị ọrụ ma ọ bụ ndị bịara abịa bụ echiche ọjọọ.
Mgbe ọ bịarammetụta na-adịghị mma, ọrụ bụ ihe ndị ọzọ siri ike. On otu aka, awara awara bụ free onwe ya, ọ na-enye a Wellness ịrịba. Ma na n'akụkụ nke ọzọ, ọ na-ekwukarị na-agbachi nkịtị bụ ndị kasị mma nhọrọ mgbe ọ na-wakporo site wetara mmetụta uche.
N'ezie, mgbe anyị na-ekwu iwe, anyị bịara ikwu ihe anyị nwere ike ịkwa ụta mgbe e mesịrị. N'otu aka ahụ, mgbe anyị na-enwe ihe mgbu ma ọ bụ mgbe ụjọ na-atụ anyị, anyị na-emeghachi omume n'ụzọ dị oke egwu na n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị.
Mgbe ahụ, ànyị kwesịrị ịgbachi obi ya nkịtị ma gbachi nkịtị? Mba! Nke a nwere ike ịkpata nrụgide ọzọ. N'aka nke ọzọ, ị ga-eji amamihe mee ihe site n'ịchọ ikpughe ihe ị na-eche n'ụzọ bara uru. Gịnị bụ ntuziaka maka ojiji?
Alaghachi azụ dị oké mkpa!
O doro anya na tupu i kwuo ihe ọ bụla, ihe mbụ ị ga-eme bụ ịchọpụta ihe ị na-eche n'ime obi gị. A na-akpọ nke a ịghaghachi azụ. Nzọụkwụ a bụ isi obodo. Ọ nwere ike igbochi gị ịzaghachi ngwa ngwa na imehie ihe.
GỤỌ Chọta nguzozi n'etiti ndụ onwe onye na ọkachamara
Dịka ọmụmaatụ, onye nlekọta gị na-agwa gị maka ọrụ ọrụ gị. Ịlụ ọgụ ozugbo nwere ike ime ka ihe ka njọ. N'ezie, i nwere ike ikwu okwu mkparị ma ọ bụ mee mkparị ma ọ bụ mee omume na-ekwesịghị ekwesị.
Ọ bụ site n'iji nzọụkwụ mee ka anyị nwee ike ịmatakwu ọnọdụ ahụ ma chọpụta mmetụta ya. Anyị aghaghị ịnwa ịchịkwa ha ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Site n'itinye usoro a, ị ga-ekpebi ụzọ kachasị mma isi meghachi omume.
N'otu oge ahụ, ị ​​ga-ahọrọ ma ịchọrọ ịkekọrịta ihe ị chere ma ọ bụ na ị chọghị. Ntị ! Ọ baghị uru iji mkpebi gwurie egwu. Ọ bụrụ na mmadụ ekpebie ikpughe mmetụta ya, onye ahụ aghaghị ịjụ onwe ya maka ihe kpatara ya na ihe ga-esi na ya pụta.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ dị mkpa iji chọpụta ihe kpatara nke a na ụdị omume ahụ. Tụkwasị na nke a, ọ dị mkpa mgbe ụfọdụ iji nọgide na-enwe uche na ebumnobi nke mmadụ chọrọ ịbịaru site n'ịkọrọ mmetụta uche ya.
Chọta asụsụ ziri ezi
Ụzọ ị na-esi egosipụta onwe gị nwere ike imetụta àgwà nke onye na-eme gị. Ọ bụ ya mere ọ dị mkpa iji họrọ asụsụ mmadụ ma chebara ihe ị ga-ekwu echiche. Iwu mbụ iji kwanyere ùgwù bụ igosipụta nsogbu ahụ n'ụzọ dị mkpa. Na-elekwasị anya na eziokwu.
N'ihi ya, ọ dị mkpa izere ime mkpebi, echiche ma ọ bụ nkọwa. Iji dokwuo anya, anyị ga-echeta eziokwu dịka ha dị. Iji maa atụ, ị nwere oge ị ga-anọnyere kọleji gị ma ọ kụọ elekere asatọ nke ụtụtụ. Ọ abịaghị n'oge. Mgbe ọ bịarutere, ịkwesighi ịta ya ụta na "you na-abịarute n'ebumnuche?" ".
GỤỌ Ịtụnanya na-atụ egwu-Egwu dị ka ihe mgbaàmà
Ọ ka mma ịsị: “Anyị nwere oge agba akwụkwọ ka elekere asatọ nke ụtụtụ; Ọ bụ 8:8 am, M na-eche gị n'ihi na ọkara otu awa ”. A na-akpọ nke a iji mmadụ kwupụta onwe ya ma doo anya.
Jiri obi ike kwupụta mmetụta gị
N'ezie, a machibidoro ikpe ikpe. Ma nke ahụ apụtaghị na anyị ga-ezobe ihe anyị na-eche. Ma ọ bụ mmechuihu ma ọ bụ iwe, ọ dị mkpa ka onye na-akpọ gị mara. Nke a na-enye ya ohere ịtụle ihe niile ọ na-eme ma tinye onwe ya.
Mara na ị nwere ike igosipụta mmetụta uche gị site na mmegharị ma ọ bụ nkwenye. Asụsụ a na-asụ na-adịkarị mfe nghọta karịa okwu. Dịka ọmụmaatụ, ọ gaghị ekwe omume ịma ma ọ bụrụ na mmadụ na-ekwu okwu ọchị ma ọ bụ dị njọ ma ọ bụrụ na ọ naghị egosipụta ya site na àgwà ya ma ọ bụ nkwenye ya.
Nke ahụ kwuru, sị, tupu ịmalite, onye ga-ebu ụzọ mata ihe ndị ọ na-eme banyere mmetụta uche na ndị na-akpata ya. Nke a bụ otu esi ejikwa ma jikwaa ha mma. Tụkwasị na nke a, ọ dị mkpa ịchụso echiche ọjọọ ndị ga-eme ka nchekasị pụta. Anyị aghaghị ịnọgide na-enwe ezi uche.
Ịkwalite ihe ngwọta
Igosipụta mmetụta uche na ụzọ ndị dị mma bụ ịmara otu esi esi gwa ha ihe ngwọta. N'ezie, ọ gaghị ezu iji mee mkparị. Ihe kacha mma bụ ịkwụsị mgbanwe ahụ na ihe dị mma.
Ya mere, ọ bụrụ na onye na-ahụ maka gị amarala mmetụta gị, ị ghaghị ikwupụta ihe a chọrọ. Tụkwasị na nke a, a ghaghị itinye nkọwa na ọnọdụ ndị ọzọ banyere mmezu ya.
Na ọnọdụ niile, ị ghaghị iji okwu ziri ezi. Ịtụ egwu egwu ma ọ bụ okwu ọjọọ bụ echiche ọjọọ. Nke a nwere ike iduga n'ọnọdụ ọjọọ. Ma ihe mgbaru ọsọ abụghị ịmepụta esemokwu gị na onye ọrụ gị, mana ịkọwa onwe gị ka ị gbanwee ihe.
GỤỌ Escaping Negativity-Chebe onwe Gị Ebumnuche Na-adịghị mma
Ezi nkwadebe dị oké mkpa!
N'ụzọ doro anya, iji gosipụta onwe gị n'ụzọ dị irè, onye ga-adị njikere iji zie onye na-aga agha, n'ihi ya, ọ dị mkpa ka ọ laa azụ. Anyị ga-enye oge anyị iji mụta otú e si egosipụta obi ọmịiko. Tụkwasị na nke ahụ, ị ​​ga-akwadebe ịkwado mmetụta uche nke onye na-ahụ maka gị. Anyị nwere ike isi otú ahụ na-emekọ ihe n'ụzọ amamihe.
Ihe a nile choro oru mmepe onwe onye. Onye aghagh i imata imata ot 'u o si emeghachi omume n' uz odi ot 'u ah u na ihe nd i ah u. Nke a bụ otu esi enwe ike ịchịkwa ha.
Na mkpirikpi, ikwupụta mmetụta uche na ụzọ ndị dị mma bụ ọrụ siri ike nke chọrọ ezigbo ọrụ n'onwe ya. Onye aghaghi imeghari ihe, muta ichikota uche na mmeghari uche. Ị ga-ahọrọ okwu gị wee mara otú ị ga-esi kwuo okwu n'atụghị egwu.
N'ikpeazụ, anyị agaghị enwe afọ ojuju ịkatọ. Ọ dịkwa mkpa iji chee ngwọta.
Nchegbu, weghachite ma kwupụta mmetụta gị n'ụzọ dị mma. November 21st, 2018Tranquillus
gara agaKedu ka esi kwenye na ọnọdụ ọkachamara?
-esonụNkatọ nke nrụpụta na-ebunye ya, nata ya.